Ukufudumala kwekhaya ngoxa ubuka iSouthland NZ - I-Airbnb
Ukufudumala kwekhaya ngoxa ubuka iSouthland NZ
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLynda
Ikhaya elikude nekhaya elinobuhle obungathethekiyo. Usapho okanye abantu abathandanayo. Yiza wonwabele ukuhlala kwilizwe elikufutshane nedolophu enepuli, i-jacuzzi kunye namaziko ezemidlalo. Ukuthenga okumnandi ngesantya esingenabungozi. I-Brown trout & country music Capital of the South. Kwiiyure eziyi-2 ngemoto ukuya kwiintaba zasekuhlaleni ze-ski kufutshane neQueenstown.
Into esiyenzayo yindawo epheleleyo equka: ikhitshi elincinci, igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle, umlilo kunye nempompo yobushushu, indawo yokuhlala eyahlukileyo kunye neintanethi. Zonke zinokutshixwa zigcina izinto zakho zikhuselekile. Ukuhlala ixesha elide ngoxa ukhangela indawo yokuhlala esisigxina xa ungena kwindawo yasekuhlaleni kuza kuba yinto entle kakhulu.
Ngoku kukho igumbi lokulala lesibini elinefenitshala enkulu kunye neeshelfu ezakhiwe kakuhle. Coca uze ube wedwa ngokupheleleyo kwikhaya lentsapho. Ebekwe kwigaraji yosapho enethoyilethi nesitya esahlukileyo.
Sinezilwanyana zethu kule ndlu, ezi zinto ziquka inja yakwalabrador, ikati emnyama namhlophe kunye ne-pony.
Indawo engummelwane ilungele usapho, imozulu entle kakhulu yokufaka intlanzi kwimilambo yasekuhlaleni, ukuya ehlathini, ukonwabela indalo, kwaye isixeko i-Invercargill sihamba nje iyure eyi-115 ngemoto kuMzantsi weBluff kunye neStewart Island. Unxweme lweCatlins lokusefa ngumgama ofanayo wokuqhuba apho iintsuku zokusefa zilandele i-sauna kwindawo yethu kwigumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waimumu